Ịṅụ Mmanya Na-aba n’Anya Ọ̀ Bụ Mmehie? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndau Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Mmanya Na-aba n’Anya? Ịṅụ Ya Ọ̀ Bụ Mmehie?
Mmadụ ịṅụ mmanya na-aba n’anya abụghị ihe ọjọọ. Baịbụl kwuru na mmanya bụ onyinye sí n’aka Chineke nke na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ. (Abụ Ọma 104:14, 15; Ekliziastis 3:13; 9:7) O kwukwara na mmanya nwere ike ịgwọ ọrịa ụfọdụ.—1 Timoti 5:23.
Jizọs ṅụrụ mmanya mgbe ọ nọ n’ụwa. (Matiu 26:29; Luk 7:34) Otu n’ime ọrụ ebube ndị a ma ama Jizọs rụrụ bụ ime ka mmiri ghọọ mmanya mgbe ọ gara agbamakwụkwọ.—Jọn 2:1-10.
Nsogbu ịṅụbiga mmanya ókè na-akpata
N’agbanyeghị na Baịbụl kwuru na ịṅụ mmanya abụghị ihe ọjọọ, o kwuru na anyị ekwesịghị ịṅụ oké mmanya ma ọ bụ ṅụbiga mmanya ókè. N’ihi ya, Onye Kraịst ọ bụla chọrọ ịṅụ mmanya na-aba n’anya ekwesịghị ịṅụbiga ya ókè. (1 Timoti 3:8; Taịtọs 2:2, 3) Baịbụl kwuru ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji ghara ịna-aṅụbiga mmanya ókè.
Ọ na-eme ka mmadụ ghara iche echiche nke ọma nakwa ka isi ghara ịkpakọ onye ahụ ọnụ. (Ilu 23:29-35) Onye mmanya na-egbu agaghị erubeli isi n’iwu a Baịbụl nyere anyị. Ọ sịrị: ‘Nyefeenụ Chineke ahụ́ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke mma, ya bụ, ozi dị nsọ site n’ike iche echiche unu.’—Ndị Rom 12:1.
Ịṅụbiga mmanya ókè na-eme ka mmadụ ghara ịna-ejide onwe ya. Ọ ‘na-anapụkwa ezi uche.’—Hosia 4:11; Ndị Efesọs 5:18.
O nwere ike ime ka mmadụ daa ogbenye, kpatakwara onye ahụ ọrịa ọjọọ.—Ilu 23:21, 31, 32.
Chineke kpọrọ ịṅụ oké mmanya na ịnụbiga mmanya ókè asị.—Ilu 23:20; Ndị Galeshia 5:19-21.
Iko ole ka mmadụ ga-aṅụ ya abụrụ na ọ ṅụọla oké mmanya?
Ọ bụrụ na mmanya mmadụ na-aṅụ na-akpatara ma yanwa ma ndị ọzọ nsogbu, onye ahụ na-aṅụ oké mmanya. Ihe Baịbụl kwuru e ji amata na mmadụ aṅụbigala mmanya ókè abụghị na onye ahụ tụbọrọ atụbọ, kama ọ bụ na uche anaghị akpakọ onye ahụ ọnụ, ya ana-adagharị adagharị, na-arụ ụka na-enweghị isi ma na-ekwugheri ekwugheri. (Job 12:25; Abụ Ọma 107:27; Ilu 23:29, 30, 33) Ndị na-agbadị mbọ ka mmanya ghara igbu ha nwedịrị ike ịṅụ oké mmanya, ma taa ahụhụ ọ na-akpata.—Luk 21:34, 35.
Mgbe mmadụ na-ekwesịghị idetụ mmanya ọnụ
Baịbụl kwuru ihe ụfọdụ nwere ike ime ka Onye Kraịst ghara ịṅụ mmanya na-aba n’anya:
Ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ndị ọzọ sụọ ngọngọ.—Ndị Rom 14:21.
Ọ bụrụ na iwu obodo machibidoro ịṅụ mmanya na-aba n’anya.—Ndị Rom 13:1.
Ọ bụrụ na mmadụ anaghị ejideli onwe ya ka ọ ghara ịṅụbiga mmanya ókè. Ndị aṅụrụma na ndị ọzọ mmanya na-aba n’anya na-akpatara nsogbu kwesịrị ịgbasi mbọ ike ka ha nwee ike ịkwụsị ịna-aṅụ ya.—Matiu 5:29, 30.
Àgwà Ọjọọ na Ihe Iri Mmadụ Ahụ́ Udo na Obi ụtọ Ihe Mmadụ Kweere na Otú E Si Efe Chineke Otú E Si Ebi Ndụ na Akparamàgwà Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
mmadụ ọ̀ ga-emeli ihe dị Jehova mma? Nke bụ́ eziokwu bụ na i nwere ike ịbụ enyi Chineke.
Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru?—Na-ejide Onwe Gị
Gịnị mere otu nwoke karịrịla afọ iri atọ aha ya bụ Cassius ji kwụsị iwe ọkụ?
Ihe Baịbụl Kwuru Banyere Mmanya Na-aba n’Anya
Gịnị Bụ Mmehie?